Kooxda Manchester United oo markaan u jihaysatay labo Weeraryahan oo ay filayso inay si fudud ku heli karto – Gool FM
(Manchester) 25 Jan 2020. Kooxda Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay u aqoonsatay Odion Ighalo iyo Islam Slimani inay yihiin saxiixyo macquul ah ka hor dhammaadka Janaayo si ay safkooda ugu soo xoojiyaan.
Iyadoo todobaad kaliya ay ka harsan tahay dhammaadka suuqa kala iibsiga, haddana Ole Gunnar Solskjaer ayaan weli helin bedelkiisa weeraryahanka kooxdiisa ee Marcus Rashford, kaasoo dhaawac muddo ah kaga maqnaanaya shaxda Naadigiisa.
Sida laga soo xigtay Sky Sports News, Macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa liiska xiddigaha ay kooxdiisa doonayso ku darsaday laacibiinta kala ah; Ighalo iyo Slimani, maadaama ay u muuqdaan kuwa si sahlan lagu heli karo.
Ighalo oo horay kaga tirsanaa Kooxda Watford ayaa iminka waqti fiican ku qaadanaya cariga shiinaha Shiinaha, isagoo dhaliyay 46 gool 62 kulan oo uu u saftay Naadiga Changchun Yatai iyo kooxda haatan uu ka tirsan yahay ee Shanghai Shenhua.
Dhanka kale Weeraryahanka Kooxda Leicester City ee Slimani ayaa qaab amaah ah ugu ciyaarayay Naadiga Monaco, intii lagu jiray qeybtii hore ee xilli ciyaareedkan, waxana ay u badan tahay inuusan diidi doonin ku biirista kooxda Manchester United haddii ay dalab ka soo gudbiso.
Iyadoo Kooxda Foxes ay u badan tahay inay ka soo horjeeddo inay xoojiso koox Premier League kala ciyaarta ayna adkaan doonto in weeraryahankooda ay ku wareejiyaaan Man United, laakiin Red Divels ayaa laga yaabaa inay guul wax ku ool ah ka gaarto hanashada xiddiga heerka caalami ee dalka Nigeria ee Ighalo.